နားထောင်လိုက်တာနဲ့ ယောင်းတို့စိတ်နှလုံးကိုအေးချမ်းသွားစေမယ့် သီချင်း(၄)ပုဒ် - For her Myanmar
နားထောင်လိုက်တာနဲ့ ယောင်းတို့စိတ်နှလုံးကိုအေးချမ်းသွားစေမယ့် သီချင်း(၄)ပုဒ်
စိတ်ညစ်ညူးနေတဲ့အချိန်တွေကို အဖော်ပြုပေးနိုင်မယ့် သီချင်းလေးတွေ
ယောင်းတို့ရေ … အပတ်စဉ်တိုင်း ယောင်းတို့အတွက် Stella ရွေးပေးနေကြ song playlist လေးအလှည့်ပြန်ရောက်လာပါပြီ။ စိတ်ပင်ပန်းပြီး ဘယ်သူ့ကိုမှစကားပြောချင်စိတ်မရှိတဲ့အခါမျိုးတွေတိုင်းမှာ နားကြပ်ကောက်တပ်ပြီး သီချင်းနားထောင်ကြတယ် ဟုတ် ? ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ စိတ်ရှုပ်တဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာ ယောင်းရဲ့စိတ်ကို ကြည်လင်သွားစေမယ့် သီချင်းလေးတွေကို Stella ရွေးပေးထားပါတယ်။ ဘာသီချင်းလေးတွေလဲ ဆိုတော့ …
(၁) Say You Won’t Let Go – James Arthur
ဒီသီချင်းလေးကတော့ ခပ်အေးအေးသံစဉ်လေးနဲ့ဆိုတော့ ယောင်းစိတ်ကို ဖြေလျော့ပေးမှာအသေအချာပါပဲ။ အသက်ကြီးပြီး ဆံပင်ဖြူသွားကျိုးတဲ့အထိ မင်းနဲ့ပဲနေချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ “Say You Won’t Let Go” သီချင်းစာသားလေးတွေက မရှိတဲ့ချစ်သူကိုတောင် သတိရသလိုလိုတွေပါဖြစ်သွားမှာပါ။
Related article>>> ‘မသိဘူး ရိုမယ်’ ဆိုတဲ့ယောင်းတို့အတွက် အရိုဆုံးရုပ်ရှင်ကား (၂) ကား
(၂) A Sky Full Of Stars – Coldplay
Coldplay ရဲ့သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ “A Sky Full Of Stars” ကို နားထောင်မိတိုင်း တကယ်စိတ်ငြိမ်သွားတာ ကိုယ်တွေ့ … ဒီသီချင်းလေးကို ယောင်းတို့နားထောင်ကြည့်ပြီးပြီလား ?
(၃) The Best Part – Daniel Caesar
“The Best Part” ကတော့ Daniel Caesar နဲ့ H.E.R ရဲ့အသံချိုချိုအေးအေးလေးတွေကို နားဆင်ခံစားနိုင်မယ့် သီချင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ ဒီသီချင်းလေးကို လိုက်ညည်းမိတိုင်း စိတ်ညစ်စရာတွေ ပျောက်သွားမယ်ဆိုတာ ရဲရဲကြီးအာမခံတယ်။
Related article>>> ချောက်ချားစရာ အကောင်းဆုံးလို့ သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ ကိုရီးယားသရဲကား (၃)ကား
(၄) ILYSB – LANY
LANY ကတော့ အခုချိန်မှာ လူသိနည်းနေသေးတဲ့ လူငယ် band အဖွဲ့ပါ။ “ILYSB” သီချင်းကတော့ LANY ရယ်လို့ ပရိသတ်တွေသိလာအောင် တွန်းပို့ပေးခဲ့တဲ့သီချင်းဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ LANY ရဲ့ပင်တိုင်အဆိုရှင် Paul Klein ရဲ့ အသံလေးကို နားထောင်ရင်း LANY ရဲ့အမာခံပရိသတ်တစ်ယောက်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်နော်။
ကဲ … ဒီတစ်ပတ်အတွက်တော့ ဒီလောက်ပါပဲ ယောင်းရေ။ Stella ရဲ့ playlist လေးကို နားထောင်ကြည့်ပြီး ယောင်းတို့အကြိုက်တွေ့လောက်မယ်ထင်ပါတယ်။ အေးအေးဆေးဆေး အနားယူရင်း နားထောင်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဦး။
စိတျညဈညူးနတေဲ့အခြိနျတှကေို အဖျောပွုပေးနိုငျမယျ့ သီခငျြးလေးတှေ
ယောငျးတို့ရေ … အပတျစဉျတိုငျး ယောငျးတို့အတှကျ Stella ရှေးပေးနကွေ song playlist လေးအလှညျ့ပွနျရောကျလာပါပွီ။ စိတျပငျပနျးပွီး ဘယျသူ့ကိုမှစကားပွောခငျြစိတျမရှိတဲ့အခါမြိုးတှတေိုငျးမှာ နားကွပျကောကျတပျပွီး သီခငျြးနားထောငျကွတယျ ဟုတျ ? ဒီတဈခေါကျမှာတော့ စိတျရှုပျတဲ့အခြိနျမြိုးတှမှော ယောငျးရဲ့စိတျကို ကွညျလငျသှားစမေယျ့ သီခငျြးလေးတှကေို Stella ရှေးပေးထားပါတယျ။ ဘာသီခငျြးလေးတှလေဲ ဆိုတော့ …
ဒီသီခငျြးလေးကတော့ ခပျအေးအေးသံစဉျလေးနဲ့ဆိုတော့ ယောငျးစိတျကို ဖွလြေော့ပေးမှာအသအေခြာပါပဲ။ အသကျကွီးပွီး ဆံပငျဖွူသှားကြိုးတဲ့အထိ မငျးနဲ့ပဲနခေငျြပါတယျဆိုတဲ့ “Say You Won’t Let Go” သီခငျြးစာသားလေးတှကေ မရှိတဲ့ခဈြသူကိုတောငျ သတိရသလိုလိုတှပေါဖွဈသှားမှာပါ။
Related article>>> ‘မသိဘူး ရိုမယျ’ ဆိုတဲ့ယောငျးတို့အတှကျ အရိုဆုံးရုပျရှငျကား (၂) ကား
Coldplay ရဲ့သီခငျြးတဈပုဒျဖွဈတဲ့ “A Sky Full Of Stars” ကို နားထောငျမိတိုငျး တကယျစိတျငွိမျသှားတာ ကိုယျတှေ့ … ဒီသီခငျြးလေးကို ယောငျးတို့နားထောငျကွညျ့ပွီးပွီလား ?
“The Best Part” ကတော့ Daniel Caesar နဲ့ H.E.R ရဲ့အသံခြိုခြိုအေးအေးလေးတှကေို နားဆငျခံစားနိုငျမယျ့ သီခငျြးကောငျးလေးတဈပုဒျပါ။ ဒီသီခငျြးလေးကို လိုကျညညျးမိတိုငျး စိတျညဈစရာတှေ ပြောကျသှားမယျဆိုတာ ရဲရဲကွီးအာမခံတယျ။
Related article>>> ခြောကျခြားစရာ အကောငျးဆုံးလို့ သတျမှတျခံထားရတဲ့ ကိုရီးယားသရဲကား (၃)ကား
LANY ကတော့ အခုခြိနျမှာ လူသိနညျးနသေေးတဲ့ လူငယျ band အဖှဲ့ပါ။ “ILYSB” သီခငျြးကတော့ LANY ရယျလို့ ပရိသတျတှသေိလာအောငျ တှနျးပို့ပေးခဲ့တဲ့သီခငျြးဆိုလညျး မမှားပါဘူး။ LANY ရဲ့ပငျတိုငျအဆိုရှငျ Paul Klein ရဲ့ အသံလေးကို နားထောငျရငျး LANY ရဲ့အမာခံပရိသတျတဈယောကျဖွဈသှားနိုငျပါတယျနျော။
ကဲ … ဒီတဈပတျအတှကျတော့ ဒီလောကျပါပဲ ယောငျးရေ။ Stella ရဲ့ playlist လေးကို နားထောငျကွညျ့ပွီး ယောငျးတို့အကွိုကျတှလေ့ောကျမယျထငျပါတယျ။ အေးအေးဆေးဆေး အနားယူရငျး နားထောငျကွညျ့ကွညျ့လိုကျပါဦး။
Tags: Entertainment, Fun, Music, playlist, songs
Stella April 12, 2019
Otaku တွေသာ နားလည်နိုင်မယ့် ပြဿနာ (၇)မျိုး
Wathun May 21, 2019